Ukusebenza kwemali eyimali-Abasebenzi abazizigidi
Sinothungelwano olomeleleyo kunye nokunxibelelana namaziko ezemali kwiimfuno zakho zezezimali! Ngokungafaniyo nenkampani esebenzela imali ye-Working Capital, amaqabane ethu eshishini aneenkqubo zokuqalisa kunye namashishini asekwe ngetyala elilungileyo. Ngokwesiqhelo, iinkampani ezisebenzayo zezezimali zifuna ubuncinci beenyanga ezintandathu zeshishini ukuze ziqwalasele abagqatswa abalungeleyo ukufaka izicelo zenkxaso-mali nangona kunjalo ngokubhekisele kwezi zinto kunokuxoxwa ngazo. Eyona nkampani yezezimali esebenza kakuhle ayizukugcina ulinde, ziya kufumana ithuba lokuncedisa ngokukhawuleza kwiimfuno zakho zezezimali!
Iiakhawunti ezifumanekayo kwiMali
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zexabiso lobuso le-Arhente efanelekileyo ye-AR
Iipesenti ezingama-50 ukuya kwengama-70% yexabiso lokulinganisa esisibonelelo
I-50% ukuya kwi-70% yexabiso lokupheliswa kwezixhobo
Ukuthenga ngeMali yokuthenga
Inkxaso-mali yeMali yoMthengisi
Ulwakhiwo Lokufumana Izinto
Inkqubela phambili kwiKhomishini yeZindlu
UkuLawulwa kweelori kunye nokuLawulwa kweLayisensi yeZinto
Imali yokuBonelela ngoRhwebo
Uncedo lwezezimali Yonyusa ukuhamba kweCash kunye nokwenza i-capital Working yeNet
Sinikezela ngobungcali kunye noluhlu olubanzi lweenkonzo zoncedo lweenkxaso zoncedo ukunceda abathengi kunye nabathengisi baqwalasele imali yabo yokusebenza kunye neemfuno zolawulo lomngcipheko.
Isicwangciso sethu sezemali sokuthengwa kwempahla siquka izisombululo ezakhiweyo ezenzelwe ukuqinisa ikhonkco lonikelo lwehlabathi nokukhusela imali esebenza ngokuvumela urhwebo ukuba luxhaswe ngezinga eliphantsi.